Ny boky Tsy maintsy vakiana ny Professional Professional Analytics | Martech Zone
Ny boky Tsy maintsy vakiana ny Professional Professional rehetra
Alatsinainy Janoary 23, 2012 Alatsinainy Janoary 23, 2012 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay ny namako akaiky Pat Coyle, izay manana masoivoho marketing ara-panatanjahantena, namporisika ahy hamaky Moneyball. Noho ny antony iray na antony hafa dia tsy napetrako tao amin'ny lisitry ny famakiko mihitsy ilay boky. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nijery ilay sarimihetsika aho ary nanafatra ilay boky avy hatrany mba hahafahako mandavaka ilay tantara.
Tsy bandy fanatanjahan-tena aho… mety tsy ianao koa. Mahalana aho no mientam-po amin'ny lalao fanatanjahan-tena any amin'ny oniversite na matihanina raha tsy hoe tsara ny amboara Stanley. Raha tsy tianao ny fanatanjahan-tena fa tianao ny isa, statistika ary famakafakana dia tokony mbola hamaky ity boky ity ianao. Paul Depodesta (ny toetrany dia Peter Brand amin'ny sarimihetsika nolalaovan'i Jonah Hill) no atidohan'ilay hetsika… miasa avy amin'ny antontan'isa hamantarana ireo mpilalao kendrena mifototra amin'ny isan-jato isan-jaton'izy ireo. Tsy maninona na mandeha tokana na avo roa heny na mandeha an-tongotra aza. Billy Beane no hozatra… ny Mpitantana Jeneraly izay mametraka ny ekipany sy ny asany amin'ny fampiasana ny statistika (ary koa fampiharana ara-barotra mahery setra izay manome vola bebe kokoa ho an'ny talenta) hitondrana ireo ekily A ho any amina fandresena ara-tantara.
Tsy ho simbaiko ho anao ny tantara, fa ity misy topy topimaso. Ny Oakland A dia manana ny ampahatelon'ny tetibolan'ny ankamaroan'ny ekipa hividy talenta. Raha te hifaninana dia mila zavatra hafa ry zareo - Analytics. Ny indostrian'ny baseball dia toy ny indostria hafa ihany, satria nitombo tamin'ny taona, habe ary harena, fahalalana andrim-panjakana mandeha lalina. Ny olana dia diso ny fahalalana andrim-panjakana… tena diso. Ny lalao dia mandresy amin'ny statistika ary very amin'ny hitsika sy ny fihazakazahana, tsy amin'ny lesoka, fihazakazahana an-trano na fandresen'ny atleta mahery vava. Eritrereto ny momba ny orinasanao manokana sy ny vinavinanao satria izany no izy foana nanao izany.
Ny olana ao Indostrian'ny Analytics dia avo roa heny. Raha nivoatra nihoatra ny tranokalanay ny paikadinay ara-barotra ary niova tanteraka ny fifandraisan'ny mpampiasa (finday, horonan-tsary, takelaka, sosialy, sns.), Rehefa miditra amin'ny tranokalanao ianao Analytics hitanao tsara izay hitantsika roa taona lasa izay. Ny olana hafa dia ny fahalalàn'ny andrim-panjakana nanapoizina ny fototry ny indostria. Ny fitaovana famakafakana sy fandrefesana farany indrindra izay manampy dia novolavolaina ivelany ny indostria.
Ny fahombiazan'ny matihanina amin'ny marketing dia matetika mikajiana amin'ny taha ambony, ny fijerin'ny pejy, ny mpankafy ary ny mpanaraka azy… raha toa ka tsy misy fiatraikany statistika amin'ny valin'ny orinasa tena izy. Marina fa ny hadisoana sy ny «homeruns» dia afaka manova ny làlan'ny lalao baseball, toy ny fidiran'ny pejy lehibe amin'ny fomba fiasa eo amin'ny sehatry ny asa… fa ny fanontaniana dia hoe tondro fampisehoana ve ianao afaka mitaona mivantana.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny raharaham-barotra rehetra dia ny mitarika sy ny mivadika. Eritrereto ny fomba nananganana an Analytics kaonty. Ny fanontaniana voalohany dia domain inona ny Analytics hapetraka eo ?! Izany no ratsy manontany tanteraka, ny fanontaniana tokony ho ahoana no ahazoanao mpanjifa? Avy eo ny fanontaniana dia tokony ho avy aiza no ahitanao azy ireo. Ary firy no tianao hitombo. Tamin'izay fotoana izay, ny Analytics Ny sehatra dia tokony hanampy amin'ny fisamborana stat rehetra ary hanampy anao hahafantatra hoe iza amin'ireo no manan-danja ary iza no tsy misy.
rehetra Analytics matihanina tokony hamaky Moneyball ary ovao ny fahatakaran'izy ireo ny ny fomba itondran'ny orinasa valiny amin'ny Internet - na tranokala ecommerce misy varotra mivantana, famoahana tranonkala ahazoana fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fidiram-bolan'ny dokam-barotra mifototra amin'ny fitsidihana, orinasam-panompoana mila mitondra fanendrena, orinasan-teknolojia mila fampisehoana tranonkala bebe kokoa, na orinasa iray manandrana miantraika amin'ny fahatsapana fotsiny ary hahatratra ny marika.
Web Analytics dia soavaly tokana… manandrana mifanentana amina fitaovana taloha amin'ireo scenario vaovao rehetra ireo. Mila a vaovao toolet izay manomboka amin'ny scenario ary asehoy anay ny fandrefesana ny fahombiazana amin'ny sehatra na sehatra rehetra.
Tags: AnalyticsBusiness analyticsfanavaozana fiovam-pofiovam-ponytanjonahits hitsmampihiditra barotrataratrafmLeadsbola ara-bolaboky bolasarimihetsika bolaantontan'isa
Ahoana ny fomba hahitana cheat SEO
Takelaka fisolokiana fiarahamonina madinidinika
Jan 23, 2012 ao amin'ny 11: 02 AM
Tantara mahafinaritra izany. Nanamboatra boky tsara sy sarimihetsika mahafinaritra. Tsy marina koa io. Beane dia nandova ny vondrona mpilalao kintana fototra izay nametraka ny vanim-potoana nahombiazany. Ny ekipany dia miharihary fa tsy nahomby nanomboka teo.
Ny tena asehon'i Moneyball dia ny fananganana marika amin'ny haino aman-jery dia mifandray kely fotsiny amin'ny zava-bita tena izy. Ny zava-dehibe dia ny famoronana tantara foronina sy manaitaitra. Tsy raharahan'ny haino aman-jery ny zava-misy mifanohitra raha tsy misy olona liana mafy hanakorontana io fitantarana io.
Jan 23, 2012 ao amin'ny 11: 18 AM
Ny boky dia miresaka momba ny sasany amin'ny tsindry avy amin'ny indostria ao amin'ny toko farany ary manome hetsika fanampiny hanohanana ny diany. Azo inoana fa toa nanakorontana ny volom-borona sasany i Michael Lewis tao amin'ilay orinasa. Tsy misalasala aho fa tsy ny statistika no “zavatra tokana” izay mitondra ekipa tsara. Ny ekipa toa ny Yankees dia nanjakan'ny mpanazatra lehibe, mpilalao mahay afaka milalao ao amin'ny toeram-pitsaboana ary koa misy kojakoja maro hafa. Raha ny amin'ny famoahana ny tantara iray manontolo ho tsy marina dia tsy maintsy hanaiky tsy miombon-kevitra aminao aho. Ny Oakland A dia nampiasa statistika handinihana mpilalao, ary ekipa hafa kosa manaiky fa manaraka ny fitarihany avy eo.
Na izany na tsy izany, tantara iray mifandraika amin'ny orinasa amin'ny ankapobeny izany. Matetika ny olona no mieritreritra fa tsy mijery ny porofo manoloana azy ireo. Izay ny moraly ao amin'ny tantara eto.
25 Jan 2012 amin'ny 5:14 PM
Lahatsoratra bilaogy iray momba ny filàko roa, baseball ary media sosialy? YES!
Ny votoatin'ny Moneyball dia tena mikendry ny fananana ambanin'ny tombana mba hananganana fahombiazana amin'ny fomba mahomby kokoa. Raha ny olon-kafa rehetra dia nandoa vola amin'ny vidin'ny antonony, ny hazakazaka an-trano ary ny ERA, Beane kosa nifantoka tamin'ny OBP. Ary ny teboka tsy fantatry ny olona maro dia ny hoe tsy ny fananganana manodidina ny OBP ny Moneyball. Ny momba ny fananganana stat tsy misy lanjany loatra. Ankehitriny rehefa nahazo ny ligy ary manome lanja kokoa ny OBP, dia tsy maintsy nanamboatra i Beane.
Toy izany koa amin'ny marketing nomerika. Milaza ny rehetra fa handany ny fotoanao sy ny volanao amin'ny Facebook, Twitter ary Google+. Saingy angamba ny fananana ambany isa dia ny Pinterest, farafaharatsiny ho an'ny marikao, ary ho fampiasam-bola mahomby kokoa ho anao izany.
Ka avelao ny olon-kafa rehetra hanary an-jambany vola any an-trano sy any an-trano. Hifantoka amin'ny OBP (Pinterest) ianao. Momba ny tsy fahombiazan'ny tsena avokoa izany.
Misaotra amin'ny lahatsoratra!